Ester 7 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
7 Afei ɔhene ne Haman+ hyiaa Ester wɔ apontow no ase. 2 Ɛnna ɔhene san bisaa Ester da a ɛto so abien wɔ nsã apontow+ no ase sɛ: “Dɛn ne w’abisade,+ Ɔhemmaa Ester? Ma wɔnyɛ mma wo.+ Dɛn na wuhia? Sɛ m’ahenni no mu fã mpo a,+ mede bɛma wo!” 3 Ɛnna Ester buae sɛ: “Ɔhene, sɛ manya w’anim dom na wobɛpene so a, anka m’abisade ne sɛ ma minnya me kra,+ na mesrɛ ma me manfo+ nso. 4 Asɛm no ne sɛ wɔatɔn+ me ne me manfo sɛ wonkum yɛn,+ ntɔre yɛn ase na wɔnsɛe yɛn. Sɛ wɔtɔn yɛn sɛ nkoa+ anaa mfenaa mpo a, anka mɛyɛ komm. Nanso ɛmfata sɛ biribi besi ama ɔhene mmom ahwere ade kɛse.” 5 Afei Ɔhene Ahasweros bisaa Ɔhemmaa Ester sɛ: “Hena+ koraa na wasi ne bo+ sɛ ɔbɛyɛ biribi a ɛte saa? Ɔwɔ he?” 6 Ester buae sɛ: “Ɔtamfo+ no ne onipa bɔnefo Haman yi.” Ɛnna Haman yam hyee no+ ɔhene ne ɔhemmaa no anim. 7 Afei ɔhene no de abufuw+ sɔre fii nsã apontow no ase kɔɔ ahemfie hɔ turo no mu; ɛnna Haman sɔre srɛɛ Ɔhemmaa+ Ester maa ne kra, efisɛ ohui sɛ ɔhene+ anya ne ho adwemmɔne.+ 8 Bere a ɔhene no fii ahemfie turom hɔ baa baabi a nsã apontow no wɔ no,+ ohui sɛ Haman butuw Ester ho wɔ mpa+ no so. Ɛnna ɔhene no kae sɛ: “Afei de, wopɛ sɛ woto ɔhemmaa no mmonnaa nso, m’ani so wɔ fie ha?” Asɛm no fii n’anom+ ara pɛ na wɔkataa Haman anim. 9 Afei Harbona+ a ɔyɛ ɔhene mpanyimfo+ no mu biako no kae sɛ: “Haman ayɛ dua+ bi a ne tenten yɛ basafa aduonum wɔ ne fie sɛ wɔnsɛn Mordekai a ɔkaa ɔhene ho asɛmpa no wɔ so.”+ Ɛnna ɔhene ka kyerɛɛ ne nkoa no sɛ: “Monkɔsɛn no wɔ so.”+ 10 Enti wɔkɔsɛn Haman wɔ dua+ a ɔyɛ maa Mordekai+ no so na ɔhene no bo dwoe.